Stickman Bike Battle na-akpọrọ gị gaa egwuregwu egwuregwu ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè | Gam akporosis
Stickman Bike Battle bụ egwuregwu ọhụrụ ọhụrụ maka gam akporo nke anyi nwere ndi nnwaputa dika ndi isi. Nke a na oge nọkwasịrị na a igwe kwụ otu ebe nke mere na otu onye n'ime ha bụ anyị na onye anyị na-asọrịta mpi anyịnya igwe ọzọ player.
Anyị na-ekwu maka ịbụ onye na-eme ọtụtụ ihe n'ịntanetị iji lụọ ọgụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ na ụdị 1v1 ma ọ bụ megide egwuregwu atọ ọzọ. A ọhụrụ aha na-anọchi n'ihi na ya àgwà na 3D na na njikwa nke a igwe kwụ otu ebe na nke anyị ga-eme ka oké jumps na unyi tracks dị ka motocross.
1 Were igwe kwụ otu ebe ma chịkwaa ala ahụ
2 Dị iche iche ọtụtụ egwuregwu ụdịdị
3 Stickman Bike Battle iji kpọọ ya na offline na onye njikwa
Were igwe kwụ otu ebe ma chịkwaa ala ahụ
Agha Stickman Bike na-enye anyị ohere, site na nlele anya nke ọma na nke ahụ na-enye ọhụụ ziri ezi ihu na ịwụ elu, gbara ịnyịnya ígwè BMX na-enwe oké usoro nke na sekit na sekit site na ugwu. Ọbụghị naanị nke a, mana ewezuga duels ndị 1v1 ahụ, anyị ga-enwe ike ikwugharị ọtụtụ oge ka anyị masịrị mmemme sekit iji nweta igwe kwụ otu ebe.
Njikwa ya dị nnọọ mfe ma dabere na osisi nchịkwa nke na-enye anyị ohere iwere ụzọ na ihe ga-abụ bọtịnụ ịwụli na onye ọzọ ịdabere na igwe kwụ otu ebe ma si otú a ghara ịwụ elu nke ukwuu. Ya mere, na ihe nkeji, na na-eso nkuzi, anyị nwere ike ijide anyị ịnyịnya ígwè BMX ịmalite egwuregwu egwuregwu ọtụtụ, nke bụ ebe a na-achọta egwuregwu kachasị atọ ụtọ akpọ Stickman Bike Battle.
N'ụzọ dị otú a anyị ga-enweta ịnyịnya ígwè ọhụrụ, iji melite ha site na ego anyị nwetara mgbe ị gụsịrị egwuregwu sekit na asọmpi 1v1 megide ndị egwuregwu ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-arụsi ọrụ ike iji nweta igwe kwụ otu ebe kachasị mma megide ọgụ ndị isi, ọgụ ezinụlọ na ọkwa ndị ọzọ na-agbakwunye ọtụtụ oge egwuregwu na egwuregwu a.
Dị iche iche ọtụtụ egwuregwu ụdịdị
En Stickman Bike Battle anyị ga-enwe ohere igwu egwu megide ọkpụkpọ ọzọ ma ọ bụ tinye agbụrụ anyị ga-egwu megide egwuregwu atọ ọzọ. Enweghikwa agba ọsọ agbụrụ na ndị isi ikpeazụ ahụ ga-ama anyị aka ka ndị kachasị mma anyị na-agba ịnyịnya igwe anyị.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ala dị iche iche, gaa na-akwadebe ugwu, snow na osimiri. Anyị ga-enwe ngụkọta nke ọkwa 30 dị iche iche na mkpụrụ edemede 23 ka ị kpọghee ma si otú a nwee oge dị ukwuu na egwuregwu nke onye na-ahụ maka ọrụ bụ isi onye isi; n'agbanyeghị, ụlọ ọrụ studio kere Stickman Bike Battle adịlarị oge eji ya agwa a na egwuregwu dị iche iche.
Abia na igwe, i nwere 20 dị iche iche na ikike dị iche iche na anyị hapụrụ gị n’ihe omimi ka unu onwe unu wee nwee ike ịchọpụta ha. Na egwuregwu ebe enwere ọtụtụ egwuregwu n'ịntanetị, enwekwara tebụl nke ndị isi site n'ọkwá, kwa ụbọchị na kwa izu ...
Stickman Bike Battle iji kpọọ ya na offline na onye njikwa
Ndị mmepe nke Stickman Bike Battle ahapụghị ihe ọ bụla na pipeline na anyị nwekwara ike kpọọ ya na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na anọghị n'ịntanetị. Ọ na-enyekwa nkwado maka ndị njikwa na gam akporo TV / Nvidia Shield. Yabụ na ọnweghị ihe ọ bụla na-efu na egwuregwu a dabere na osisi nke ị nwere ike iji sọọ mpi na ndị egwuregwu si ebe ọ bụla na mbara ụwa.
Nyochawa ya ọ dị ezigbo mma ọ na-enyekwa mmetụta nke ịnya igwe na ihe niile ọ gụnyere. A na-enyefe jumps n'ụzọ dị mfe site na pịa ma naanị anyị ga-a attentiona ntị na iji nkà dị iche iche n'oge ụfọdụ. Iji mee ka 3D pụta ìhè na ụfọdụ sekit nke ejiri aka rụọ nke mere ka anyị wee gafee ụdị mbara ala niile.
Stickman Bike Battle na-abia Android na oru ulo nke oma emechara na ọchịchọ ịkwanye ọtụtụ puku ndị egwuregwu egwu na-achọ ịsọ mpi na igwe kachasị mma. Have nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google Play na freemium ahụ anyị maara. Ugbu a ị nwere ike ịchọ onye mmegide iji gosi ya onye na-ejikwa igwe BMX ahụ mma.
Stickman Bike Agha
Onye ọrụ aka ahụpụtara sekit
Moddị dị iche iche
Enweghi ụfọdụ eziokwu na njikwa
Developer: Ụlọ ọrụ Djinnworks GmbH
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mpi megide ndị ọzọ Player na gị BMX igwe kwụ otu ebe na Stickman Bike Agha
Ugbu a ị nwere ike iji foto Xiaomi Mi 9 SE were foto gaa ọnwa